Semalt तपाइँलाई Seo खोज इञ्जिन अनुकूलन को बारे मा सबै भन्छ
धेरै बार खोज ईन्जिन अनुकूलन वरिपरि। आज तपाईंले यो तातो शीर्षकसँग जडित सबै कुरा जान्न पाउनुहुनेछ! SEO के हो? SEO को फाइदा के हो? कुन शर्तहरू SEO वरिपरि घुम्छ? को जान्न र SEO लागू गर्न सक्दछ? यस लेखमा, इभान कोनोवालोभ, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, माथिका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन खोज्छन्।
जब एक व्यक्तिले खोज इन्जिनमा कुञ्जी शब्द (कुनै शीर्षक वा क्वेरी) प्रविष्ट गर्दछ (गुगल, बिंग, याहू, आदि हुन सक्छ) उसले वा उसले विभिन्न खोज परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। जसरी यो हो, यसले एसईओ (खोजी इन्जिन अप्टिमाइजेसन) गठन गर्दछ, र यो सामान्यतया खोजी परिणामको पहिलो पृष्ठमा रैंकिंग वरिपरि घुम्छ।
किन SEO महत्व राख्छ?
आजको द्रुत गतिको संसारमा, श्रेणीकरणको मतलब सबै चीज हुन्छ। लाखौं पृष्ठहरु तपाइँको ध्यान को लागी प्रतिस्पर्धा को साथ, यो केवल ती मात्र पहिलो पृष्ठमा रैंक हुन्छ जुन राम्रो सौदा हुन्छ। केवल तार्किक हुन; पृथ्वीमा कोसँग खोजी परिणामहरूको सयौं पृष्ठहरु पार गर्न समय छ? Who? यसले SEO को आवश्यकताको वर्णन गर्दछ।
SEO को फाइदा के हो?
कुनै श doubt्का बिना, उपक्रम एसईओको सबैभन्दा ठूलो फाइदा वा बरु लाभ भनेको जैविक यातायात हो (गैर-भुक्तानी वा प्राकृतिक) यसले तपाईंको वेबसाइटको लागि उत्पन्न गर्दछ। जब तपाइँ वेब ट्राफिक बढाउनुहुन्छ, तपाइँका उत्पादनहरू र / वा सेवाहरू फराकिलो श्रोताले देख्दछन्, जसले रूपान्तरणको साथसाथै नाफा मार्जिन पनि मार्दछ।
SEO को लागी को हो?
यो शाब्दिक रूपमा सबैको लागि हो। जे होस् खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको मेकानिक्स अलि जटिल छ (के तपाइँ कुनै वेब-आधारित एल्गोरिथ्मको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ जुन होईन), मूल कुरा बुझ्दा तपाइँको वर्डप्रेस ब्लाग वा वेबसाइटमा आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्दछ। वरपर हेर्नुहोस्, र तपाईं सयौं प्लेटफर्महरू निःशुल्क एसईओ शिक्षा प्रदान गर्ने देख्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। र यदि तपाईंको वेबसाइट ठूलो लिगमा सामेल हुन्छ भने तपाईं SEO विशेषज्ञलाई भाडामा लिन सक्नुहुनेछ।
SEO-सम्बन्धित सर्तहरू तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ
१. व्हाइट ह्याट एसईओ - यसले श्रोताको ध्यानमा राखेर वेबसाइटको अप्टिमाइजेसनलाई जनाउँदछ। सेतो टोपी एसईओ को पछाडि विचार सरल छ; दर्शकहरूलाई गलत तरीकाले नहटाउनुहोस्, तपाईंको पृष्ठलाई कहिले पनि स्प्यामको रूपमा लेबल हुन नदिनुहोस्। आधिकारिक बन्नको लागि सक्दो प्रयास गर्दा तिनीहरूको विश्वास कायम राख्नुहोस्।
२. कालो टोपी एसईओ - तपाई यसलाई सेतो टोपी एसईओ को विपरितको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ। जबकि सेतो टोपी श्रोताको संलग्नतामा केन्द्रित छ, कालो टोपीले गर्दैन। एउटा द्रुत हेराईले प्रकट गर्दछ कि यस प्रविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू प्राय: उनीहरूको वेबसाइटहरूलाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गरिन्छ। तिनीहरूसँग अक्सर गरिब स्तर निर्धारण हुन्छ तर जे होस्, राम्रो पैसा कमाउनुहोस्। यसले एकलाई सब भन्दा चाँडो र्याकेन्ड प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
On. पृष्ठमा एसईओ: तपाइँको पोष्ट मा सबै चीज गठन गर्दछ। यो मेटा ट्यागहरू, हेडिंगहरू, URL संरचना, Alt पाठ (छवि फाईलहरूको लागि), लोड गर्ने गति, लिंकहरू, पोष्ट गरिएको सामग्रीको गुणस्तर र यस्तै अरू धेरै हुन सक्छ।
Off. अफ-पृष्ठ SEO: यसले डोमेन प्राधिकरणलाई विचारमा राख्छ। यहाँ कारकहरू जस्तै डोमेनको उमेर, यसको लोकप्रियता, र त्यस्ता सम्बन्धित कारकहरू विचारमा राखिन्छन्।
यहाँ SEO मैत्री पोष्ट लेख्न को लागी केहि सल्लाहहरु छन्:
उच्च खोज मात्रा र कम प्रतिस्पर्धाको साथ कुञ्जी शब्दहरूको लागि जानुहोस्
उचित मेटा विवरण प्रयोग गर्नुहोस्